Ilmo 3 Jir Ah Oo Ka Qayb Galaya Shir-madaxeedka Qaramada Midoobay ee New York Ka Socda | Burconews
Ilmo 3 Jir Ah Oo Ka Qayb Galaya Shir-madaxeedka Qaramada Midoobay ee New York Ka Socda
Burconews.net_Raysul wasaaraha New Zealand Jacinda Ardern ayaa khudbaddeedii ugu horreysay ka jeedisay shir madaxeedka Qaramada Midoobay ee magaalada New York – sidoo kale waxaa ku wehlisa gabadheeda 3 bilood jirka ah, waana markii ugu horreysay ee shirka QM uu cunug yar ka qeyb galo.
Khudbaddeedii ugu horreysay ayay ku daah furtay shir nabadeedka Mandela, halkaasoo ay uga hadashay sida uu hogaamiyihii hore ee Koonfur Africa “saameynta uga lahaa” dalkeeda gudihiisa.
Odayga Qaba Ra’iisal Wasaaraddu waa Wariye TV balse waxa uu Imika caawinayaa xaaskiisa
“Runtii Neve mar walba way ila joogtaa marka aan ku suganahay New Zealand,” ayay tiri Ms Ardern, sida laga soo xigtay warbaahinta dalkaas.
“safarkiisa wuxuu ku saabsan yahay inuu iyada xannaaneeyo oo kaliya” ayay tiri.
Ms Ardern ayaa shaqada xafiiskeeda dib ugu laabatay horraantii bishii Agoosto, ka dib markii ay soo dhameysatay “lixdii isbuuc ee ugu dhasiyaha badneyd nolosheeda” oo ay ku maqneyd fasaxa dhalmada.
“Ra’iisul wasaare Ardern waxay muujineysaa inuusan jirin qof ka fiican hooyo dalkeeda mataleysa” ayuu yiri afhayeenka Qaramada midoobay Stephane Dujarric oo la hadlayay wakaaladda wararka ee Reuters.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu intaas ku daray “kaliya boqolkiiba 5 ka mid ah hogaamiyeyaasha caalamka ayaa haween ah, sidaas awgeed waxaan u baahannahay inaan iyaga ka dhigno kuwo halkaan loogu soo dhaweeyo si macquul ah”.